Sida loo soo biir Dhowr RMVB Files galay Mid ka mid fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo soo biir RMVB Faylal ay si fudud oo dhaqso
Hayso laba qaybood ama dhawr ka mid ah qeybaha kala filim qaab RMVB oo jeclaan lahaa inuu iyaga ku biiro? Isticmaal arjiga video ku biiro ah sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si ay u sameeyaan dadaal lahayn. Waxaa ku biiray badan RMVB video qaybo si wadajir ah ula tayo wanaagsan leh ee Windows (Windows 10 ka mid ah). Ka sokow, waxay awood aad u dhoofiso dhammaan qaabab caan ah oo loo maqli karo ciyaartoy warbaahinta la qaadi karo ama xataa si toos ah gubi file RMVB biiray si DVD.
Hoos waxaa ku talaabada hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loogu biiro files RMVB in madal Windows. Haddii aad socda Mac ah, fadlan isticmaal Filmroa Wondershare u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) si ay ugu biiraan RMVB ee Mac la isku tallaabooyin.
1 files Import RMVB
Marka aad ordi codsiga tafatirka RMVB this, dooran muuqa sida 16: 9 ama 4: 3 galo suuqa kala barnaamijka. Dhinaca geeska bidixda ah ee kore, guji "Import" xitaa folder file aad, ka dibna ku shuban files RMVB aad rabto in aad wada isugu daro. (Talooyin: Si aad u dooratid files badan waqti, ee aad qaban karto hoos u muhiim ah Ctrl si ay u doortaan.)
2 Ku biir videos RMVB by jiitaa-n-dhibic
Barnaamijkan smart siisaa hab quruxsan fudud si ay u wada midowdo files RMVB aan farqiga kasta. Waxaad si fudud u baahan tahay in aad kuwaa oo mid mid u galay Timeline video ah. Markaas ay la muuqan qaso doonaa file hal. Fiiro gaar ah: Fadlan ha ku dahaadhaa mid video gal kale, haddii kale waxaad ka dillaacisay doonaa video asalka laba qaybood. Haddii ay dhacdo in aad ka dhigi qalad ah oo kale, kaliya wax miiran "Ctrl" + "Z" si ay u burburin lahaayeen.
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u jar ama laga soo gooyay oo qaar ka mid ah qayb ka mid aan loo baahnayn. Si aad u samayn, mouse ka badan slidebar ah. Marka a "II" icon u muuqataa, jiidi waxaa xaq u leedahay in jar ka baxay qayb ka mid ah uma baahnid inaad ka tagay ama. Si aad u soo gooyay qaar ka mid ah qayb ka mid dhexe, waxaad u soo jiidi kartaa bar horumarka uu furmo suuqa previewing si aad boos doonayo, waxaa la joojiyo ka dibna riix "Sicssor" icon si ay u kala qaybiyaan laba qaybood. Mar kale ku celceli ilaa aad ka hesho qayb doonayay, ka dibna ku dhuftay "Delete" on keyboard ah inaad ka saartid.
3 Codso kala guurka (optional)
Kala-guur oo u dhexeeya laba clips ka dhigi doonaa filim oo dhan macna oo qani. Nasiib wanaag, joiner RMVB this sidoo kale awood u aad uu ka soo xulan 73 arrimo kala guurka xor ah oo khuseeya boos kasta oo aad rabto. Riix ah "guurka" tab, ka dibna jiidi mid aad jeceshahay in laba clips kasta video on Timeline. Haddii aad rabto in aad ku darto kala guurka isla dhammaan videos istareexsan, si fudud xaq u guji dooro "ayaa waxay khuseeyaan dhammaan" ama "Random in All" inay ka sameeyaan in ilbiriqsi.
3 dhoofinta aad files RMVB biiray
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay bixisaa habab kala duwan si ay u dhoofiyaan aad abuuray RMVB video. Hit ah "Abuur" button in la furo suuqa kala pop-up wax soo saarka, oo halkan aad kala dooran karto wax badan oo fursado.
Save si qaab inta badan la isticmaalo: Dooro wmv, AVI, MOV, MP4. Mpg, MKV, FLV. iwm si ay u dhawraan on your computer.
Beddelaan in kasta oo qalabka loo jecel yahay, qaado iPhone 5, iPhone 4s, New iPad, iPad 2, PS3, Galaxy S III, si toos ah horena qaybiyay.
Guba in qaab DVD, file ISO image: Tag "DVD" tab, iyo in DVD gubi RMVB for loo maqli karo ee ciyaaryahan kasta DVD joogto ah.